November 17, 2020 - Achawlaymyar
သိပျခဈြတတျတဲ့ ယောကငြ်ျား လေးတှကေို မိနျးကလေးတှေ ဘာလို့ထားခဲ့ကွသလဲ….
November 17, 2020 by Achawlaymyar
သိပ်ချစ်တတ်တဲ့ ယောင်္ကျား လေးတွေကို မိန်းကလေးတွေ ဘာလို့ထားခဲ့ကြသလဲ လူတစ်ယောက်က ကိုယ့်ကို အရမ်းချစ်တာမျိုး ကြုံဖူးပါသလား။ ဒါမှမဟုတ် ကိုယ်က သူ့ကို အရမ်းချစ်တာမျိုးကိုရော ခံစားရဖူးပါသလား။ အမျိုးသမီးတွေဟာ အရမ်းချစ်တဲ့ ယောင်္ကျားလေးတစ်ယောက်ရဲ့ အချစ်ကို ခံနိုင်ရည်မရှိကြပါဘူး။ဘာလို့လဲဆိုတော့….. ၁။ အမျိုးသမီးတွေဟာ လွတ်လပ်မှုကိုကြိုက်ကြပါတယ် အမျိုးသမီးတွေမှမဟုတ်ပါဘူး။ လူတိုင်းပါပဲ။ သူတို့ကို ချုပ်ချယ်တာမျိုးကို ကြိုက်ကြမယ်မထင်ပါဘူး။ ဒါပေမယ့် ပြဿနာတစ်ခုက အမျိုးသားတွေဟာ လူတစ်ယောက်ကို …. ပက်ပက်စက်စက် ချစ်မိသွားရင် အရမ်းချုပ်ချယ် ကြတော့တာပါပဲ။ ငါလိုင်းပေါ်မရှိရင် ဖုန်းမသုံးရဘူးတို့။ သူငယ်ချင်းယောင်္ကျားလေးတွေ ပေးမထားတာတို့ပေါ့။ ပြောရရင်တော့ အများကြီးပဲ။ ၂။ သဝန်တိုလွန်းတာဟာ သူ့ကိုနေရခက်စေတယ် သင့်အနေနဲ့ ချစ်လွန်းလို့ သဝန်တိုတာကို လက်ခံပေမယ့် အရမ်းသဝန်တိုလာရင်တော့ တဖက်လူရဲ့ အခွင့်အရေးကို ပိတ်ပင်တာမျိုး ဖြစ်သွားတတ်ပါတယ်။ ဒါ့ကြောင့် … Read more
ထီးဖွူနက်ခတျကိနျးနှငျ့အဓိပတိနက်ခတျကိနျးဆိုကျ၍ တနင်ျဂနှသေားသမီးနှငျ့ဗုဒ်ဓဟူး သားသမီးမြား ဖတျပါ
၂၀၂၀ ၊နိုဝင်ဘာလတွင်နေ့သားသမီးအသီးသီးအလိုက်ရတနာပုံကိန်းဆိုက်ချိန်မရှိသဖြင့်အောက်ဖော်ပြပါနက္ခတ်များဖြင့် တိုက်ဆိုင်သည့်ဗုဒ္ဓဟူးနှင့်တနင်္ဂနွေသားသမီးများထီကံစမ်းနိုင်သည်။အဓိပတိနက္ခတ်ကိန်းဖြင့်ဗုဒ္ဓဟူးနေ့သားသမီးများ ၂၅. ၁၁.၂၀၂၀ဗုဒ္ဓဟူးနေ့နံနက်၁၀နာရီမှနံနက်၁၀နာရီ၃၀မိနစ်အတွင်းထီးဖြူနက္ခတ်ကိန်းဖြင့်တနင်္ဂနွေသားသမီးများ ၂၉.၁၁.၂၀၂၀တနင်္ဂနွေနေ့ (တန်ဆောင်မုန်းလပြည့်နေ့)နေ့လည်၂နာရီ၅၀မိနစ်မှနေ့လည်၃နာရီ၁၅မိနစ်အတွင်းထီကံစမ်းနိုင်မည်ဖြစ်ပါသည်။ တနင်္ဂနွေ၊ဗုဒ္ဓဟူးနေ့နံများဖြင့်စတင်မှည့်ခေါ်သောမြို့၊ရွာ၊ဒေသများမှလည်းထီဆုကြီးဆွတ်ခူးနိုင်ပါသည်။ မိမိတို့၏ဇာတာခွင်ပါထီပေါက်ကံအားနက္ခတ်ဥယျာဉ်တွင်ကျသင့်ငွေပေးသွင်းပြီးဆန်းစစ်နိုင်ပါကြောင်း လေးစားစွာဖြင့်အသိပေးအပ်ပါသည်ဦးဇေယျာကို(နက္ခတ်ဥယျာဉ်)၀၉၅၃၉၃၃၄၃၊၀၉၄၀၀၅၀၀၀၀၉ Unicode ထီးဖွူနက်ခတျကိနျးနှငျ့အဓိပတိနက်ခတျကိနျးဆိုကျ၍ တနင်ျဂနှသေားသမီးနှငျ့ဗုဒ်ဓဟူး သားသမီးမြား ထီပေါကျကိနျးရှိသညျ ထီးဖွူနက်ခတျကိနျးနှငျ့အဓိပတိနက်ခတျကိနျးဆိုကျ၍တနင်ျဂနှသေားသမီးနှငျ့ဗုဒ်ဓဟူးသားသမီးမြားထီပေါကျကိနျးရှိသညျ ၂၀၂၀ ၊နိုဝငျဘာလတှငျနသေ့ားသမီးအသီးသီးအလိုကျရတနာပုံကိနျးဆိုကျခြိနျမရှိသဖွငျ့အောကျဖျောပွပါနက်ခတျမြားဖွငျ့ တိုကျဆိုငျသညျ့ဗုဒ်ဓဟူးနှငျ့တနင်ျဂနှသေားသမီးမြားထီကံစမျးနိုငျသညျ။အဓိပတိနက်ခတျကိနျးဖွငျ့ဗုဒ်ဓဟူးနသေ့ားသမီးမြား ၂၅. ၁၁.၂၀၂ဝဗုဒ်ဓဟူးနနေံ့နကျ၁ဝနာရီမှနံနကျ၁ဝနာရီ၃ဝမိနဈအတှငျးထီးဖွူနက်ခတျကိနျးဖွငျ့တနင်ျဂနှသေားသမီးမြား ၂၉.၁၁.၂၀၂ဝတနင်ျဂနှနေေ့ (တနျဆောငျမုနျးလပွညျ့နေ့)နလေ့ညျ၂နာရီ၅ဝမိနဈမှနလေ့ညျ၃နာရီ၁၅မိနဈအတှငျးထီကံစမျးနိုငျမညျဖွဈပါသညျ။ တနင်ျဂနှေ၊ဗုဒ်ဓဟူးနနေံ့မြားဖွငျ့စတငျမှညျ့ချေါသောမွို့၊ရှာ၊ဒသေမြားမှလညျးထီဆုကွီးဆှတျခူးနိုငျပါသညျ။ မိမိတို့၏ဇာတာခှငျပါထီပေါကျကံအားနက်ခတျဥယြာဉျတှငျကသြငျ့ငှပေေးသှငျးပွီးဆနျးစဈနိုငျပါကွောငျး လေးစားစှာဖွငျ့အသိပေးအပျပါသညျဦးဇယြောကို(နက်ခတျဥယြာဉျ)၀၉၅၃၉၃၃၄၃၊၀၉၄၀၀၅၀၀၀၀၉
မြန်မာ့စပါးအုံး အောင်လအန်ဆန်းပွဲအား ဒီဇင်ဘာလတွင် ရက်သတ်မှတ်လိုက်ပြီ…..
ကဲ ကဲ မှနမြာနိုငငြံသူနိုငငြံသားတှအေားလုံးမှနမြာ့စပါးအုံးအောငလြရဲ့ပှဲကှီးပှဲကောငြးတဈပှဲဒီဇငဘြာ ၈ ရကနြလေ့ာပါတော့မညြ အနီအကှောငွးလညွးတောပွှီ အစိမွးအကှောငွးလဲတောပွှီရပကွှေးအကှောငွးလဲတောပွှီပှောလို့ဆိုလို့လဲ ဝသှားပှီ လာပှီ လာပှီဒီဇငဘြာ ၈ ရကနြမှေ့နမြာ့ဂုဏဆြောငအြမသေ့ားကှီးကိုအားပေးကှပါအုံးလို့ အမွိုးတို့ရေCrdမိုးသုတနိူငြ(မှနမြာစာ) zawgyi, ကဲ ကဲ မွနျမာနိုငျငံသူနိုငျငံသားတှအေားလုံးမွနျမာ့စပါးအုံးအောငျလရဲ့ပှဲကွီးပှဲကောငျးတဈပှဲဒီဇငျဘာ ၈ ရကျနလေ့ာပါတော့မညျ အနီအကွောငျးလညျးတျောပွီ အစိမျးအကွောငျးလဲတျောပွီရပျကြေးအကွောငျးလဲတျောပွီပွောလို့ဆိုလို့လဲ ဝသှားပွီ လာပွီ လာပွီဒီဇငျဘာ ၈ ရကျနမွေ့နျမာ့ဂုဏျဆောငျအမသေ့ားကွီးကိုအားပေးကွပါအုံးလို့ အမြိုးတို့ရေCrdမိုးသုတနိူငျ(မွနျမာစာ)
အပျိုဖော် ဝင်ခါစ ၁၆ နှစ်သမီးလေး အခန်းထဲကို အဖေတစ်ယောက် ဝင်ကြည့်လိုက်တဲ့အခါမှာ
အပျိုဖော် ဝင်ခါစ ၁၆ နှစ်သမီးလေး အခန်းထဲကို အဖေတစ်ယောက် ဝင်ကြည့်လိုက်တဲ့အခါ သမီးမရှိပဲ အခန်းက သပ်ရပ်နေပြီး စားပွဲပေါ်မှာ စာတစ်စောင် တင်ထားတာ တွေ့လိုက်ပါတယ် စာကို ဖတ်ကြည့်တဲ့အခါ ချစ်သောဖေဖေ ဒီစာကို ရေးရတဲ့အတွက် စိတ်မကောင်းပါဘူး ။ ဖေဖေနဲ့ မေမေကို တကယ်ချစ်ပါတယ်။ သို့ပေမယ့် သမီးရဲ့ ချစ်သူနောက်ကို အပြီး လိုက်သွားပါပြီ။ စိတ်မဆိုးပါနဲ့ ဖေဖေ သူကသမီးအပေါ် ကောင်းပါတယ်။အပြင်ပန်းက တက်တူးတွေ၊ ဆေးမင်ကြောင်တွေဘယ်လောက်ပဲများများ သူသမီးကို တကယ်ချစ်တာ ခံစားမိပါတယ်။ သမီးထက် ၁၄ နှစ် ပိုကြီးတယ်လေ။ အိမ်ထောင်ကွဲပေါ့။ သို့ပေမယ့် သူ့ဇာတ်လမ်းတွေ ပျက်သွားပြီလို့ ကတိပေး ထားတယ်။ သူကတိဖျက်တာ ၁၅ ခါ မကပေမယ့် ဒီတစ်ခါတော့ နောက်ဆုံး ဖြစ်မယ်လို့သမီး … Read more
ယနေ့မနက် ၆ နာရီအချိန်မှာ မစိုးအိမွန်ဆုံးပါးသွားပါပြီ…..
မစိုးအိမှနျ ယနမေ့နကျ ၆ နာရီအခြိနျမှာ ဆုံးပါးသှားပါပွီ…ထမငျးမစား၊ ဆေးမသောကျနဲ့ နလောခဲ့တဲ့သူမ ပိနျခြုံးပွီး မပုံ့ရေ မရတော့ဘူးလို့ ပွောကွပမေဲ့ ဆေးရုံတငျပေးခဲ့တယျ… ဆေးရုံ ၇ ရကျလောကျတကျ၊ သှေးတှသှေငျးနဲ့ ဆငျးလာတော့ ပွနျကောငျးမယျတောငျ ထငျထားခဲ့တာ…ခုတော့ ဆုံးသှားရှာပွီတဲ့….. ပုံ့ကိုတှရေ့ငျလေ..”..ပုံ့ပုံ့…ပုံ့ပုံ့ ဝတျတဲ့ ဂါဝနျလေး ပေးနျော၊ ပုံ့ပုံ့ စိုးအိမှနျလေ အမနေဲ့နခေငျြလို့ အမကေို့ ရှာပေးနျော… ပုံ့ပုံ့ စိုးအိမှနျက အေးတဲ့နရောနခေငျြတာ၊ ပုံ့ပုံ့ စိုးအိမှနျကို စိတျကနျြးမာရေးဆေးရုံ မပို့ပါနဲ့နျော စိုးအိမှနျ အခုကောငျးနပွေီ…ပုံ့ပုံ့ စိုးအိမှနျကိုလေ အဖှားတှနေဲ့ အတူထားပေးနျော…”..ပုံ့ပုံ့၊ ပုံ့ပုံ့ နဲ့ ပူဆာလိုကျတာ… ပွောခငျြတာတှပွေောပွီးရငျလဲ လကျအုပျလေးခြီလို့…”…ပုံ့ပုံ့ မကွီးပွောတာ အမှားပါရငျ စိတျမဆိုးနဲ့နျော၊ ကနျတော့တယျနျော၊ပုံ့ပုံ့တို့က သူတျောကောငျးလေ… အဲ့ဒါ မကွီးက သရေငျ ခှေးပွိတ်တာမကွီး … Read more
အမစေု အပါအဝငျ နိုငျငံတျော တာဝနျ ထမျးဆောငျ နသေူမြားရဲ့ လစာမြား…..
အမေစု အပါအဝင် နိုင်ငံတော် တာဝန် ထမ်းဆောင် နေသူများရဲ့ လစာများ ဗိုလ်ချုပ်မှူးကြီး ဦးသန်းရွှေ ( ငြိမ်း) တစ်လကိုပင်စင်လစာ သိန်း (၁၀၀) ဒုတိယဗိုလ်ချုပ်ကြီး ဦးမောင်အေး (ငြိမ်း) တစ်လပင်စင်လစာ သိန်း ( ၈၀ ) သမ္မတဟောင်း ဗိုလ်ချုလ်ကြီး ဦးသိန်းစိန် (ငြိမ်း) တစ်လပင်စင်လစာ သိန်း ( ၈၀ ) ပြည်ထဲရေးဝန်ကြီးဟောင်း ဗိုလ်ချုပ်ကြီးဦးကျော်ဆွေ (ငြိမ်း) ပင်စင်လစာ တစ်လ သိန်း ( ၅၀ ) ဗိုလ်ချုပ်မှုးကြီး ဦးမင်းအောင်လှိုင်အငြိမ်း စားယူရင် တစ်လပင်စင်လစာ သိန်း (၅၀) ခံစားခွင့်ရှိသည်ဟုအခြေခံဥပဒေကပြဌာန်းပေးထားတယ် ။ နိုင်ငံတော်သမ္မတ ဦးထင်ကျော် ပင်စင်လစာ တစ်လ ( ၅ ) … Read more
နေတတ်သွားတာမဟုတ်ဘူး… ရင့်ကျက်သွားတာ… သည်းခံတတ်တာမဟုတ်ဘူး… ခံရဖန်များတော့လဲ အရေထူသွားတာ… မာနကြီးတာမဟုတ္ဘူး… မာနကိုထားသင့်တဲ့နေရာထားတတ်သွားတာ… မခ်စ္တတ္တာမဟုတ္ဘူး… တခြားသူကိုချစ်ရမှာထက်ကိုယ့်ကိုကိုယ် ပိုချစ်တတ်သွားတာ… အဖော်မဲ့တာမဟုတ်ဘူး… တစ်ယောက်တည်း နေတတ်သွားတာ… ဆင်းရဲတာကိုကြောက်တာမဟုတ်ဘူး… ငွေမရှိရင်နှိမ်တတ်ကြတဲ့ လူတွေရဲ့ဆက်ဆံမှုပြောင်းလဲပုံကိုကြောက်တာ… ငွေမက်တာမဟုတ်ဘူး… ငွေကအရာရာကိုစကားပြောနိူင်စွမ်းရှိမှန်း သိသြားခဲ့လို့… ပြန်မပြောတတ်တာမဟုတ်ဘူး… စကားလုံးတွေရှာမရအောင်ဆွံအသွားတာ… ဂရုမစိုက်ဘူးဆိုတာထက်… တချို့တချို့ကို ဥပေက္ခာပြုတတ်သွားတာ… ဘဝကပေးတဲ့ သင်ခန်းစာထက်… လူတွေကပေးတဲ့ သင်ခန်းစာက… စိတ်ထဲမှာ အက်ကြောင်းထပ်နေအောင်မှတ်မိစေတယ်… လေးစားစွာဖြင့် MayHsu(ရာမညမြေ) Unicode နတေတျသှားတာမဟုတျဘူး… ရငျ့ကကျြသှားတာ… သညျးခံတတျတာမဟုတျဘူး… ခံရဖနျမြားတော့လဲ အရထေူသှားတာ… မာနကွီးတာမဟုတ်ဘူး… မာနကိုထားသငျ့တဲ့နရောထားတတျသှားတာ… မချစ်တတ်တာမဟုတ်ဘူး… တခွားသူကိုခဈြရမှာထကျကိုယျ့ကိုကိုယျ ပိုခဈြတတျသှားတာ… အဖျောမဲ့တာမဟုတျဘူး… တဈယောကျတညျး နတေတျသှားတာ… ဆငျးရဲတာကိုကွောကျတာမဟုတျဘူး… ငှမေရှိရငျနှိမျတတျကွတဲ့ လူတှရေဲ့ဆကျဆံမှုပွောငျးလဲပုံကိုကွောကျတာ… ငှမေကျတာမဟုတျဘူး… ငှကေအရာရာကိုစကားပွောနိူငျစှမျးရှိမှနျး သိသွားခဲ့လို့… ပွနျမပွောတတျတာမဟုတျဘူး… စကားလုံးတှရှောမရအောငျဆှံအသှားတာ… ဂရုမစိုကျဘူးဆိုတာထကျ… … Read more
အချစ်ရေးကံမကောင်းဘူးဆိုတာ ဒီလို အချက်တွေကြောင့်ပါ…
အချစ်ရေးကံမကောင်းဘူးဆိုတာ ဒီလို အချက်တွေကြောင့်ပါ… နှလုံးသားရေးနဲ့ ပတ်သတ်ရင် အမြဲ အဆင်မပြေ ဖြစ်တတ်ကြသူတွေ ရှိပါတယ်။ ချစ်မိလိုက် သစ္စာ ဖောက်သွားလိုက်၊ ချစ်မိလိုက် အထားခဲ့ခံလိုက်ရနဲ့ သူတို့ရဲ့ အချစ်ရေးက ဘယ်တော့မှ ကြာရှည် ရှိမနေတတ်ကြပါဘူး။ အချစ်ရေး ကံမကောင်းတဲ့ အခြေအနေမျိုးကို ကြုံရတဲ့ သူတွေကတော့ ဒီလို အခြေအနေတွေကြောင့်ပဲ ဖြစ်ပါတယ်နော် …။ (၁) နားလည်မှု မပေးနိုင်လို့” နားလည်မှု မရှိတဲ့ ဆက်ဆံရေးကို ဘယ်သူမှ မလိုမရှိတတ်ကြပါဘူး။ သင်က ဆိုးနွဲ့တတ်သူ ဖြစ်ပြီး တစ်ဖက်သားကို နားလည်ပေးတာမျိုး မရှိဘူးဆိုရင်တော့ ဒီဆက်ဆံရေးက မကြာရှည်တတ်ပါဘူး။ ကိုယ့်ကိုပဲ တဖက်သတ် နားလည်ပေးရပြီး ကိုယ်က နားလည်ပေးဖို့ ဝန်လေးနေတတ်တဲ့ အကျင့် ရှိသူဆိုရင်လည်း အချစ်ရေးကာလက တိုတတ်ပါတယ် …။ … Read more
အနာရှိလျှင်​ အရပ်​ပျံ ထိ​တော့ စပ်​ကြမှာပဲ …​ယောက်ျားယုတ်​နဲ့ မိန်းမ​ကောင်းများ အတွက်​သာ…
သင့်ဇနီး ဆိုတာ သင့်​ဇနီး​နေရာမှာ သင့်​အ​မေ၊သင့်​အစ်​မ၊သင့်​နှမသာဆိုလျှင်​ဘယ်​လို​နေမလဲ? သူသည်​လည်းပဲ မိန်းမထဲကမိန်းမတစ်​​ယောက်​ပါ ။ အ​သွေးနဲ့အသားနဲ့တည်​​ဆောက်​ထားတဲ့လူပါ ။ သက်​မဲ့ အရုပ်​တစ်​ရုပ်​ မဟုတ်​ပါ… သင့်​အ​မေဖြစ်​တဲ့ မိန်းမသားချင်း ကိုယ်ချင်းစာကြည့်​ပါ။ သင့်​နှမဖြစ်​တဲ့ နှမချင်းကိုယ်​ချင်​စာကြည့်​ပါ။ စိတ်​တိ်ုလျှင်​ဘာမှမမြင်​ဘူးဆိုတဲ့ ဆင်​​ခြေတစ်​ခုနဲ့ သွယ်​ဝိုက်​မ​ပြောနဲ့ …. သင်​​တောင်​မှ သင့်​အသားထိလျှင်​ နာတက်​​သေးတာပဲ… ဝဋ်​ဆိုတာ မလည်​ဘူးမထင်​နဲ့ ….ခံရတဲ့အခါ ပြုံးနိုင်​ကြိုးစားပါ။ တချိန်​မှာ သင့်​ညီမဟာလည်း သူများရဲ့ သားမယားဖြစ်​နိုင်​သလို၊ သင့်​သမီးကလည်း​ သူများသားမယားဖြစ်​နိုင်​တယ်​။ လူစိတ်​ရှိတဲ့​ယောက်ျားတစ်​​ယောက်​၊ လူလိုသိတက်​တဲ့ခင်​ပွန်း​ကောင်းတစ်​​ယောက်​က အားနွဲ့တဲ့ မိန်းမတစ်​​ယောက်​၊ အားနွဲ့တဲ့ ဇနီးတစ်​​ယောက်​အ​ပေါ် ဘယ့်​​တော့​မှ ကိုယ်​ထိလက်​​ရောက်​ မ​စော်​ကားဘူး၊ အနိုင်​မကျင့်​ဘူး… အဲ့ဒီလို လုပ်​ရပ်မျိုးကို လုပ်တဲ့သူက​​ အ​တွေးအ​ခေါ် သိမ်​ဖျင်းတဲ့​ယောက်ျားညံ့၊ ​ယောက်ျားယုတ်​​တွေရဲ့ လုပ်​ရပ်သာ​ဖြစ်​တယ်​။ အနာရှိလျှင်​ အရပ်​ပျံ ထိ​တော့စပ်​မှာပဲ။ အနာရှိသူများ … Read more
နာမည်ကြီးနေတဲ့ မော်လမြိုင် ကိစ္စ ကောင်လေးကို ရဲစခန်းခေါ်လာပါပြီ…..
နာမည်ကြီးနေတဲ့ မော်လမြိုင် HDကိစ္စ ကောင်လေးကို ရဲစခန်းခေါ်လာပါပြီ အသက်မပြည့်သေးတဲ့ မိန်းကလေးနဲ့ လိင်ဆက်ဆံခွင့်မရှိဘူး။မိန်းကလေးအလိုတူရင်တောင် ဒါဟာ မုဒိန်းမှုမြောက်တယ်။ဒါပေမယ့် အဲ့ကောင်က စောင့်စည်းရမှန်းမသိဘူး။လုပ်ရုံတင်မက videoပါရိုက်တယ်။ပြီးတော့ ရိုက်ထားတဲ့ ဗီဒီယိုကို ရည်ရွယ်ချက်ရှိရှိနဲ့လိုင်းပေါ်တင်ပစ်တယ်။ဘယ်လိုမိသားစုက ပေါက်ဖွားလာတဲ့ကောင်တုန်း။ဖြန့်တာတောင် ကောင်မလေးရှက်ပြီး သတ်သေသွားသည်အထိ ဖြန့်မှာတဲ့။မသေသေးသ၍ အထပ်ထပ်ဖြန့်နေမှာတဲ့။ တားတဲ့သူငယ်ချင်းတွေက တားကြတယ်။ကောင်မလေးအသက်က ၁၆နှစ်ပဲရှိသေးတာ။ဒီကောင်က ၁၈နှစ်။စိတ်ယုတ်မာချက်က မိမဆုံးမ၊ဖမဆုံးမမှန်းသိပ်သိသာတယ်။အဲဒီcaseကို မနေ့က ကျနော်လိုက်တယ်။သက်သေအစုံအလင်ရတယ်။ဒီကောင်ဖြန့်ခိုင်းတဲ့ သူငယ်ချင်းကလည်း ဝန်ခံတယ်။ဒီကောင်ကိုယ်တိုင်ကလည်း ဝန်ခံတယ်။ ပြဿနာက ပြီးသွားပြီ။ကောင်မလေးဘက်က နစ်နာမှုအတွက် တောင်းဆိုတာတွေလိုက်လျောပါ့မယ်။ကျနော်တင်ထားတဲ့ postတွေ ဖျက်ပေးပါဆိုလို့ ကျနော် only meပေးလိုက်တယ်။ကျနော်လည်း ဘယ်သူ့ကိုမှ အရှက်ရစေချင်တဲ့ ကောင်မဟုတ်ဘူး။နစ်နာခဲ့ရတဲ့ မိနိးကလေးအတွက် တရားမျှတမှုကို ရရှိစေချင်ရုံပဲ။ လွန်ခဲ့တဲ့ သုံးပတ်က ဖြစ်ခဲ့တဲ့ ကိစ္စပါကောင်မလေးတို့ဘက်က နုံအပြီးကြောက်တတ်တော့ဘာမှကို မတောင်းဆိုရဲဘူး။မနေ့ကမှ ကျနော်နဲ့ဆုံပြီးရသင့်တာပြန်ရဖို့ … Read more